भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणका बिषयमा बागलुङका स्थानीय तहको गुनासो::Online News Portal from State No. 4
भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणका बिषयमा बागलुङका स्थानीय तहको गुनासो
१२ गतेको भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण पुर्ण क्षति भएका २ हजार ३ सय ७५ निजी आवासकोे तथ्यांक
बागलुङ, २६ पुस – भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणका बिषयमा बागलुङका स्थानीय तहले गुनासो गर्न थालेका छन् । न्युन आय भएका परिवारको लागि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले उपलव्ध गराउने अनुदान रकम निकै कम भएको गुनासो यहाँका स्थानीयले गरेका छन् । प्राधिकरणले उपलव्ध गराउने अनुदान रकम निकै कम भएकाले सर्वसाधरणले भुकम्पले भत्काएका घर बनाउन नसकेको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देव कुमार नेपालीले बताए । ‘तीन लाख रुपैयाँले घर बन्दैन थप रकम खर्च गर्न नसक्नेका घर कसरी बनाउने ?’ नेपालीले भने ‘सरकारले दिने भनेको ऋण समेत झण्झटिलो भएकाले गरिबले लिन सकेनन् ।’ उनले अनुदान रकम बढाउनुपर्ने माग समेत गरे ।
प्राधिकरण अन्र्तगत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले बागलुङमा आयोजना गरेको ‘भुकम्प पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना बिषयक अभिमुखीकरण तथा समिक्षा’ कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहको गुनासो एकै खालको देखिन्थ्यो । जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले पनि सरकारले दिएको अनुदानका आधारमा निजी आवास पुननिर्माणको कामले गति लिन कठिन भएको बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिकाका ४ परिवारले पहिलो किस्ताको रकमका लागि सम्झौता गर्न नै मानिरहेका छैनन्’ बुढाले भने ‘दिनभर मजदुरी नगरे खान पुग्दैन, अनुदानको रकमले मात्रै घर बन्दैन् ।’ प्राधिकरणले बनेका घरको लागि अनुदान उपलव्ध नगराएका कारण सबैभन्दा धेरै गुनासो आँफुहरुसँग आउने गरेको उनको भनाई थियो । निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले पनि अनुदानको भरमा मात्रै आवास पुननिर्माण गर्न कठिन हुने बताए । स्रोत हुनेले आफ्नो निजी लगानीमा अनुदान थपेर आवासको पुननिर्माण गरेका भएपनि स्रोतको अभाव भएकाहरु पुननिर्माणको कार्यक्रममै सहभागी हुन नचाहेको उनको भनाई थियो । पौडेलले बिभिन्न समयमा आईपरेका दैविक प्रकोपका कारण भएका क्षतिलाई पनि पुनःनिर्माण कार्यक्रमसँग जोडेर लैजान आग्रह गरे । बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले बनेका घरहरु प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड नपुग्ने र अनुदानका लागि सिफारिस स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताए । ‘सिफारिस माग्दै हामीकहाँ पिडित आउनुहुन्छ’ शर्माले भने ‘सिफारिस दिए मापदण्ड पुग्दैन, नदिए हामीले काम नगरीदिएको भन्नुहुन्छ ।
’ निश्चित कार्यबिधि बनाएर बनेका घरको समस्या समाधान गर्न शर्माले माग गरे । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भने सरकारले तोककोभन्दा धेरै रकम उपलव्ध गराउन नसक्ने बताएको छ । निजी आवास निर्माणमा सरकारले उपलव्ध गराएको तीन लाख सहयोगलाई सरकारको सहभागिताको रुपमा बुझ्न प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले आग्रह गरे । ‘स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आशा गरेको जस्तो रकम बढी आउने कुनै सम्भावना छैन्’ श्रेष्ठले भने ‘राज्य कोषमा थप व्ययभार पर्नेगरी यसलाई तलमाथि गर्न सक्ने ठाउँ पनि नरहेकाले सबैलाई प्रष्ट हुन आग्रह गर्दछु ।’ समस्यामा रहेका निजी आवासका लागि बिभिन्न गैह्रसरकारी संस्था र स्थानीय सरकारको सहयोग मागिने उनले बताए । क्षति भएर छुटेकालाई अन्तिम पटक सहभागी हुने मौका दिईने भन्दै श्रेष्ठले प्राधिकरणले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्ने सबैलाई सहयोग गर्ने जनाए । बागलुङमा २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण पुर्ण क्षति भएका २ हजार ३ सय ७५ निजी आवासकोे तथ्यांक रहेको छ । जसमध्ये ८२ आवास प्रबलीकरणका लागि सिफारिस भएका छन्भने बाँकी सबै पुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने निजी आवासमध्ये २ हजार १ सय ५६ जनाले मात्रै सम्झौता गरेका छन् । बाँकी सबै सम्झौता गर्न नआएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले जनाएको छ । सम्झौता भएकामध्ये २ हजार ७० परिवारले पहिलो किस्ताको रकम बुझेका भएपनि दोस्रो किस्ताको रकम बुझ्नेको संख्या भने निकै कम रहेको छ ।
७ सय १७ परिवारले दोस्रो र ४ सय ७ परिवारले तेस्रो किस्ताको रकम बुझेको इकाई प्रमुख रामसिष साहले बताए । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डमा रहेर आवास पुनःनिर्माण गर्न कठिन हुने भएकाले व्यक्तिगत सहभागिता जनाउन नसक्नेहरु अनुदान लिन नआएको स्थानीय तहको बुझाई छ । कार्यक्रममा अमृत श्रेष्ठ, रामसिष साह, चन्द्रकान्त लौडारी, डा. योगेन्द्र रिजाल, दिवत कुमार श्रेष्ठ लगायले प्रगति विवरण सहितका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा बिभिन्न स्थानिय तहबाट उपस्थित प्रबिधिक तथा कर्मचारीहरुले सेवा सुविधाको बिषयमा समेत आवाज उाएका थिए । बिभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि, कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका नासु चुर्ण कार्कीले गरेका थिए ।